တော်တော်လေးကို ကိုးရိုးကားရားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ် - JAPO Japanese News
တော်တော်လေးကို ကိုးရိုးကားရားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်
လာ 20 Jan 2020, 9:55 မနက်
၁၈၄၁ခုနှစ်တွင် Hirofumi Ito ကို Yamaguchi စီရင်စုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးခဲ့သူ၊ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ရာထူးရရှိထားတဲ့ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်၊ သူ့မှာရှည်လျားတဲ့နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေရှိလို့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့သူတစ်ယောက်များလားလို့ထင်မိစေပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူဟာ အရမ်းကို ကိုးရိုးကားယားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
၁၈၇၁ခုနှစ်မှာတော့ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ မစ်ရှင်အနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံဘက်သိုစေလွှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သူရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ယခင်ဂျပန်အစိုးရက အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ မညီမျှတဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကိုကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု၊ အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လုပ်ဖို့က အလွန်ပဲအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံကိုခရီးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကလည်းတော်တဲ့ Itoတစ်ယောက်ဟာမစ်ရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြောပြတဲ့အခါ အမြင်ကတ်ခံရ လူမုန်းခံရပြန်ပါတယ်။
အဲလိုလူမျိုးတွေလည်းအခုထိရှိပါသေးတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စတွေကို Ito က လုံးဝမမှုပါဘူး။ သူကျွမ်းကျင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ နေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်သူလျှောက်လျက်ပါ။
တစ်နေ့သောအခါကပေါ့ သင်္ဘောပေါ်မှာရန်ပွဲဖြစ်နေတာကိုသူမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကိုမြင်တဲ့ Ito က ရန်ဖြစ်တာကို ကြားဝင်ရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့
“အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆို ဒီလိုရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာ တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်တာတို့ စစ်ဆေးစီရင်ခံတာတို့တွေလုပ်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းကြတာ” လို့ ပြောပြီး သူကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ရန်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ရလဒ်က. . .“Ito မင်း အရမ်းတွေဘဝင်မြင့်နေပြီနော် !” လို့ အနီးနားကလူတွေဆီက အပြောခံလိုက်ရပါတယ်။
ဧကရာဇ်မင်းရဲ့ရှေ့နေဆိုတာကိုမေ့သွားမိပြီး ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့ အတည်ပြုလို့မရ၊ ပြန်လာဖို့လည်း သင်္ဘောထွက်တဲ့ရက်ကို စောင့်ရတာရက်တော်တော်လေးကြာပါတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့သွားလဲမသိဘူးနော်။ အခွန်တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးတော့မှ. . .
သူမေ့လျော့တဲ့အရာတွေကအလွန်အံ့သြဖွယ်ရာတွေပါ။ နောက်ထပ်မေ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကြီးရှိပါသေးတယ်။
၁၈၈၉ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဂျပန် Imperial ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို Imperial နန်းတော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီး၊ Ito က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘုရင်မင်းမြတ်ထံအပ်နှံပြီး ပြဌန်းရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ရေးသားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အတူစာအုပ်ကို သူ့အိမ်မှာမေ့ကျန်မိသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တောင်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။
ဘာတွေလုပ်နေတာလဲနော် အဲဒီလူက. . .လို့ထင်တဲ့လူအများစုရှိမယ်လို့ထင်ပေမယ့် အဲဒီခေတ်ကတည်းက ခေတ်သစ်ဂျပန်သို့ပြောင်းလဲတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလဖြစ်နေတော့ မလုပ်ရင်မဖြစ်တဲ့လုပ်စရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှားပါပြီး နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအကြောင်းလူနည်းနည်းလေးသိတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတော့ Ito ဟာအနာဂတ်အတွက် မျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အရမ်းများလွန်းလို့ သူဟာမွေ့ယာပေါ်မှာအိပ်ဖို့အချိန်တောင်သိပ်မရဘူးလို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူဟာ သတိမရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုကြောက်စရာမုတ်ဆိတ်မျက်နှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တည်ကြည်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပူးတွဲမြင်ယောင်မိသေးရဲ့လား? လပေါင်းများစွာလှေနဲ့ခရီးနှင်လာပြီးနောက် ရှေ့နေဆိုတာကိုမေ့သွားမိရာက ပြန်သတိရတဲ့ အခိုက်အတန့်၊ သူဟာ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေမလဲ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်‌ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဌာန်းရမယ့်အချိန်မှာ အဲဒါကိုမေ့လျော့မိသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုများထိတ်လန့်မိခဲ့မလဲ။
အဲဒါကိုစိတ်ကူးကြည့်တာလေးနဲ့တင် 伊藤博文( Ito Hirofumi ) ကို ပိုမိုရင်းနှီးနီးကပ်စွာခံစားမိပါတယ်။
အသင်းဝင် ၈ ယောက်ပဲရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း
၂ မိနစ်လေးနောက်ကျရုံနဲ့ ၅ နာရီလောက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ
အနောက်တိုင်းသားတွေအတွက် မကိုက်ညီတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
တောင်ပေါ်ကနေကြားရတဲ့ နတ်ဆိုးသံ !!!!!
Toilet ကနေပြန်ထွက်မလာတဲ့သမီးဖြစ်သူကို မိခင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်သောအခါ !!!!
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဂျပန်ရှေးရိုးရာထုပ်ပိုးမှုပုံစံ !!!
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေမြှုပ်အလွယ်ဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ တိုကျိုမြို့
ဇိမ်ခံ sports car စီးလိုက်ရင် popular ဖြစ်သွားနိုင်ချေရှိလား ?
Uber EATS ရဲ့ deli သမားတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ
အကောင်းဆုံးရှယ်ရထားကြီးစီးပြီး ငြိမ့်ညောင်းသာယာစွာခရီးထွက်ရအောင် !!
ဘယ်သူမှမဆင်းကြတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် ရထား platform တစ်ခု !
သေခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းများ !!!